I-Fuller Street Beach Dredging Project, Ucwaningo Lokulungisa Ukubuyiselwa Kwebhishi
I-Fuller Street Beach, Izinzuzo Zokubuyiselwa Kwe-Eel Pond
Njengoba kunesikhathi sokwehla kwe-Edgartown esiphela, i-Fuller Street Beach ithole i-makeover entsha, futhi abagibeli bezikebhe bangabheka phambili ekuphepheni okuphephile e-Eel Pond entwasahlobo.
ISandwich entsha isuswe e-Eel Pond e-Edgartown isiza ukubuyisa i-Fuller street beach -Mark Lovewell
Ntambama ekhanyayo kuleli sonto, inqwaba yezinyoni zasolwandle nomuntu owayehamba ngezikhathi ezithile bezijabulisa ibhishi, lapho ipayipi elikhulu landa cishe ngamamitha angama-3,500 ukusuka echibini, liphela nje enyakatho ne-Edgartown Lighthouse. Umoya oshubile osenyakatho uvimbe kancane ukuxegisa kwesihlabathi ngokusebenzisa ipayipi nokuthambisa kwesilayidi esingaphambili.
I-Edgartown iyidolobha lesiqhingi kuphela elinohlelo lokugcotshwa okugcwele. - UMark Lovewell
Ama-seagulls aqoqene esiteshini esincane lapho ipayipi laphela khona, njengoba uMark DeFeo eshayela emuva naphambili endaweni yokulayisha engaphambili esakaza izinqwaba zesihlabathi zibheke endlini yokukhanyisela.
Le phrojekthi izosiza inqwaba yabanikazi bezimonyo zangasese, kanye nabantu abaningi abajabulela ugu lomphakathi unyaka wonke. NgoLwesihlanu olulandelayo kuphawula ukufika kweflebhela ebusika echibini nangosuku lokugcina lokuphinda kudlule.
Ikomidi lase-Edgartown dredge - okuwukuphela kweqembu lohlobo lwaso esiQhingini - linquma ukuthi lizohlala kuphi unyaka ngamunye. Engxoxweni neGazethi kuleli sonto, ilungu lekomidi, uDudley Levick, ucashele ukuthi cishe egcekeni lama-cubic e-4,000 kuzobe sekukhishwe echibini ngempelasonto ezayo. Inani eliphelele lizoqinisekiswa yinhlolo-vo entwasahlobo.
"Isihlabathi esiningi besilokhu sihamba ogwini futhi sithathe lonke isihlabathi kuFuller Street Beach," kusho umphathi wetheku lase-Edgartown uCharlie Blair, osebenza njengomeluleki waleli komidi. "Icishe yancishiselwa emuva ngomgwaqo." Ukuhamba kwesihlabathi ngasogwini kudale ukuthi kube nzima ukubhukuda e-Eel Pond futhi kuqale ukuvala itheku eliseningizimu-mpumalanga ye-lightlight.
Uhlelo lokwehliswa kwedolobha lwaqala kuma-1980s lapho ikomidi lithathe isinqumo sokuthi izindleko zokulungiswa njalo zivumela idolobha ukuthi lisebenze. Abavoti bavumile, ngokuhamba kwesikhathi bavuma ukuthengwa kwe- $ 400,000. Ikomidi le-dredge linesabelomali sonyaka esisebenza cishe ama- $ 132,000.
Isithombeni esivela kuma-1980s sibonisa i-Fuller beach beach dock, manje isidlulile ngenxa yolwandle olungenayo. - UMark Lovewell
I-Edgartown nayo ibiyidolobha lokuqala esiQhingini ukuthola imvume ebanzi yokudonsela phansi, manje esehlanganisa cishe amasayithi we-17 amakiwe ukuze alondolozwe.
U-Eel Pond wabanjwa eminyakeni eminingana eyedlule, kepha ukuzama kancane kancane sekuphinde kwavela kabusha. Isamba esikhulu sokuduka sakhishwa futhi ngonyaka owedlule, kepha ubusika obunzima babuyisela ingxenye enkulu yaleyo nqubekela phambili. Kulo nyaka, idolobha laqala ukulungiselela ekuqaleni, kodwa umsebenzi awukwazanga ukuqala kuze kube maphakathi no-Novemba ukulandela imihlahlandlela yombuso.
Isimo sezulu esipholile kulo nyaka sivumele inqubekela phambili esheshayo endaweni.
“Imvamisa siphelelwa yizinsuku eziningi ngenxa yempahla eqandisiwe bese uyiqamba igama,” kusho uMnu. Blair. "Konke okungahambi kahle kuhamba kahle ngesikhathi sasebusika."
Iphrojekthi kungenzeka ukuthi ingafinyeleli ekufezeni umgomo wayo, kodwa izosondela. "Sesizofika ekugcineni," kusho uMnu. Levick. "Okusele ukuthi ukwenze ngeke kwanele ukufanela ukwakhiwa kabusha konyaka olandelayo." Kungenzeka ukuthi abasebenzi baqhubeke nokubopha leli bhishi elisha ngemuva komnqamulajuqu wokusebenza echibini.
Ngaleso sikhathi, ikomidi le-dredge lithatha imibono ngalo lokuthi yimaphi amaphrojekthi okufanele aqhubeke ngonyaka olandelayo. Umdwebi wamasosha wase-Edgartown uPaul Bagnall, oweluleka leli komidi uthemba ukuthi lizoyibhekisisa iCape Pogue eseChappaquiddick, lapho ukwanda kwegazi kungasizakala nge-eelgrass ne-shellfish.
Dredging Eel Pond, ukondliwa kwasolwandle ebhishi lakwaFuller Street.
Abakwa-Edgartown bathola u- $ 62,250 ngonyaka ophelile bevela ehhovisi leCoastal Zone Management ukuthi babuyiselwe ngezinga elikhulu eFuller Street Beach, Loundouse Beach naseLaneouse Pond, kepha iphrojekthi yamanje ihlinzekelwe ngokuphelele yizimali zedolobha.
Ukuboshwa okuncane bekuyikhona kuleli sonto e-Edgartown Great Pond, kucekelwa phansi isihlabathi ukwenza kube lula ukwephula umthetho waminyaka yonke okufafaza amanzi echibini futhi kukhulise nosawoti wezolwandle. Eminyakeni emibili edlule, leli dolobha kanye neGreat Pond Foundation bahlangana ukuze basuse ukudubula okubangelwe iSiphepho iSandy e2012.
E-2009 waphinda futhi e2014, leli dolobha lasusa isixa esikhulu sesihlabathi eSengekontacket Pond, sithuthukisa ukujikeleza, futhi sathengisa lokho kubanikazi bomhlaba abazimele ukuze bondliwe ebhishi kule ndawo. Kodwa ukugawulwa kabusha kwesinye isikhathi kufanele kuphindwe njengoba i-shorelines ihamba ekuguguleni nasekulweni.
"Senze umsebenzi omuhle impela eSengie, kodwa ngeshwa izinto zizogcwaliseka, amabhishi azoqhubeka nokukhubazeka," kusho uMnu. Bagnall. "Mhlawumbe sekuphele iminyaka embalwa, kodwa ngeke kungimangaze ukuphinde ngibone ukuphinde ngiphinde ngiphawule."
OLUNYE UQHAWULO KUNESIMI SESIKHATHI ESISEKELWE NGOKUKHANYA IBHODU elidala le-Harbour View, entshonalanga nje yegumbi lokukhanya. UMnu Blair uthe kuzosuswa amagceke angama-cubic ambalwa kuphela esizeni.
Isikhathi sonyaka wedolobhana siphela ngoJan. 15.